सार्कको उत्तोलकमा भारतीय वजन बढाउने मोदीको दाउ - Jhilko
सार्कको उत्तोलकमा भारतीय वजन बढाउने मोदीको दाउ
काठमाडौ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्कको उत्तोलकमा भारतीय वजन बढाउने दाउ चालेको देखिएको विज्ञहरूको बुझाइ रहेको छ ।
सार्कमा चीनको बढ्दो प्रभावले भारत कमजोर भएको भारतीय अनुभवलाई सन्तुलनमा ल्याउन यहाँको उत्तोलकमा भारतीय वजन बढाउनुपर्ने आवश्यकतालाई मोदीले राम्ररी बुझेका छन् ।
भारतले पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने चाहना चीनको रहेको छ । तर पाकिस्तानको विरोध गरी सम्पन्न १७ औं लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीका लागि ऐतिहासिक बहुमत जुटाउन सफल मोदीले तत्कालै पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नु कुटनीतिक र राजनीतिक दुबै दृष्टिले सही नभएको देखिएको छ ।
पाकिस्तानको भूमिमा गएर लडाकु विमानबाट आक्रमण गरेको र त्यसबाट पाकिस्तानमा ठूलो क्षति भएको दाबी प्रधानमन्त्री मोदी र तिनका सहयोगीहरूले निर्वाचन प्रचारको क्रममा गर्दै आएका थिए ।
अर्कोतर्फ चीनले मोदी नेतृत्वको भारतलाई सहयोग गरेको देखिएको छ । पाकिस्तानी संगठन जैश ए मोहम्मदका नेता मसूद अजहरलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको कालो सूचीमा राख्नका लागि विरोध गर्दै आएको चीनले आफ्नो अडान हटाएपछि त्यो सूचीमा अजहर समावेश हुन पुगेको थियो ।
पाकिस्तान समर्थित लडाकु संगठनको विरोधमा भारतको यो ठूलो कूटनीतिक सफलता रहेको थियो । यसले मोदीलाई चुनाव जित्न सफलता मिलेको पनि देखिएको छ ।
मोदीको दोस्रो कार्यका लागि बिहीबार आयोजना गरिएको सपथ ग्रहणमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई निम्तो गरिएन ।
पाकिस्तानमा कतिपयले यसलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गरेको भए पनि खान सरकारले हुलुका रूपमा लिएको छ ।
केही दिन अघि संघाई सहयोग संगठनका सदस्यहरूका विदेशमन्त्रीहरूको किर्गिस्तानको बिशकेकमा आयोजित बैठकमा भाग लिन तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र उपलब्ध गराएको विषयलाई लिएर पाकिस्तानमा खानलाई मोदीले सपथ ग्रहणमा बोलाउने अड्कल गलत साबित भएपछि केही आलोचना देखिएको थियो ।
तर पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरेसीले यसलाई स्वाभाविक भएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने “निर्वाचन अभियानभरि चुनाव जित्न मोदीले पाकिस्तानलाई गाली गर्दै आउनु भयो । निर्वाचन लगत्तै प्रधानमन्त्री खानलाई निम्तो गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन थियो ।”
भारत सरकारले मोदीको सपथ ग्रहणमा सार्कका छिमेकीलाई नबोलाएर बिम्स्टेकका छिमेकीलाई बोलाउने निर्णयबाट कतै सार्कको नीति त फेरिएको होइन भन्ने अड्कल गरिएको छ ।
बंगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, नेपाल र भुट्टानका नेताहरूलाई बोलाइने भएपछि यस्तो भन्नु स्वाभाविक भएको कतिपयको बुझाइ हुन सक्छ ।
किनभने सन् २०१४मा मोदीको पहिलो सपथ ग्रहणका बेला दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कका सबै सदस्य देशका नेताहरूलाई बोलाइएको थियो ।
त्यतिखेर पाकिस्तानको तर्फबाट प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ सहभागी भएका थिए ।
तर यसपटक नबोलाइनुमा पाकिस्तानी विदेशमन्त्री कुरेसीको बुझाइ तर्कसंगत रहेको देखिएको छ ।
पाकिस्तानले भारतबाट पाकिस्तानको हवाइ मार्गबाट जाने विमान सेवाका उडान बन्द गरेको अवस्थामा भारत सरकारका विदेशमन्त्रीका लागि बाटो दिनु आफैमा स्वाभाविक हो र ?
भाजपाकै नेता अटलबिहारी प्रधानमन्त्री रहेका बेला नेपालमै सम्पन्न भएको सार्क शिखर सम्मेलन तत्कालीन सैनिक शासक परवेज मुसर्रफलाई भारतले हवाइमार्ग उपलब्ध नगराएको दुई देशको सम्बन्ध धेरै पुरानो भएको छैन् ।
यस्तो अवस्थामा बिशकेक जान सुष्मा स्वराजलाई भारतकै आग्रहमा हवाइ मार्ग उपलब्ध गराएको र पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीसँग स्वराजले भेटवार्ता गरेको समाचार मोदीको सपथ ग्रहण हुन अघि नै सार्वजनिक भएको हो ।
यस्तोमा दुबै देशबीचको सम्बन्ध धेरै खराब भएको भन्न सकिने आधार देखिदैन् ।
अगामी महिना किर्गीस्तानमा आयोजना हुने संघाइ कोपरेशन संगठन(एससीओ)को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खानसँग मोदीको भेटवार्ता हुन सक्ने अपेक्षा गरिएकै छ ।
त्यसबेला पाकिस्तानले भारतबाट उडने विमानहरूका लागि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
चीनले मसूद अजहरलाई कालो सूचीमा राख्ने बेला पाकिस्तान र भारतबीचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन यसमा ढिलाइ गरेको जनाएको थियो ।
ठीक त्यहिबेला अफगानिस्तानका तालिबानी विद्रोहीसँग अमेरिकाले शान्तिवार्ताको पहल गरेको थियो ।
पाकिस्तान र भारतबीचको तनाव बीच स्वराजलाई हवाइ मार्ग उपलब्ध गराउनु भनेको बाजपेयी र मुसर्रफ बेलाको जस्तो सम्बन्ध नभएको दर्शाउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि कतिपय सवालहरू चीन, अमेरिका, जापान, युरोपियन युनियन , इरान, उत्तर कोरिया , भारत र पाकिस्तानका सम्बन्धहरूमा देखा परेका छन् । ती मध्ये चीन अमेरिका बीचको व्यापार युद्ध र दक्षिण चीन सागर सम्बन्ध विषय महत्वपूर्ण छन् ।
यस्ता विषयको समाधान खोज्दा भारत र पाकिस्तानलाई छुट्टयाएर हेर्न सक्ने कुटनीतिक अवस्था नरहेकाले भारतले सार्कलाई उपेक्षा गरेको ठहँर्दैन् । उसले सार्कमा घटेको वजन बढाउन खेलेको दाउ मात्र रहेको देखिएको छ ।
दुई देशको सम्बन्ध राम्रो नभए यस क्षेत्रको समृद्धि खोज्नु भनेको एक अर्कामाथि उल्का पातको आंशका बाहेक केही हुँदैन् । पाकिस्तान परमाणु शक्ति सम्पन्न देश भएपनि भारतको भूराजनीतिक वजनको बराबराको हैसियत पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गर्न अझ केही समय लाग्ने देखिएको छ । त्यसैले चीनका कारण खस्केको वजन बढाउन मोदीको सपथ ग्रहणबाट पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने नीतिलाई अगाडि बढाइएको छ ।
सङ्घीयताको प्रश्न अझै हल भएको छैनः नेता भट्टराई
प्रदेश नं. –१ मा लगानी सम्मेलनको तयारी
आउँदो वैशाखमा हुने सो सम्मेलनको निश्चित् मिति प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले...
उपसभामुखको राजीनामा आउँदै....
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुअघि सभामुखलाई सम्बोधन गरेर संसद् सचिवालयमा राजीनामा दिने...
राजश्व छलीका २९ बोरा चिनी बरामद
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको कलुवापुरबाट प्रहरीले आज भारतबाट राजश्व छलेर ल्याउँदै गरेको...